Muxuu Somaliland uga dhigan yahay ololihii nadaafadda ee aan loo kala hadhin? - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
July 30, 2021 at 13:50 Muxuu Somaliland uga dhigan yahay ololihii nadaafadda ee aan loo kala hadhin?2021-07-30T13:50:21+02:00 ARRIMAHA BULSHADA, MAQAALLADA
Hoggaamiya dhabta ahi (Inspirational Leader) maaha ka gacmaha laabta ee xagga dambe iska fadhiista dadkana ku amra in ay shaqeeyaan, waase ka isagu horseedka u noqda hadba hadafka uu dadka ku hagayo. Taas waxa shalay muujiyey Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo Maayar Cabdikariim Axmed Mooge.
Maayar Cabdikariim ilaa intii xilka lagu wareejiyey waxa muuqata in aanu maalina nasan, kuna dadaalayo buuxinta filashada 26kii kun ee qof ee codkooda ugu deeqay. Waxay u egtahay in ay maayarka ay ka go’an tahay meelmarinta hadafkii uu ku celcelin jiray ee ahayd Hargeysa oo nadiif ah oo qurux badan.
In kastoo ay tahay wakhti aad u horraysa in wax laga sheego waxqabadka Golaha Degaanka ee Hargeysa, haddana tallaabooyinka koowaad ee aynu arkaynaa waa kuwa lagu diirsan karo, u qalma in aynu bogaadino, innaguna hagi kara halka durugsan ee aynu ku socono.
Shaqada uu Cabdikariim wadaa may dhiirigelin oo kali ah reer Hargeysa, waxayse carisay magaalooyinka iyo degmooyinka Somaliland. Waxa bilaabmay tartan ay goleyaasha deegaanku ku soo bandhigayaan shaqooyinka ay ku nadiifinayaan kuna qurxinayaan magaalooyinka ay masuulka ka yihiin.
In uu Madaxweynuhu ka qaybgalo ololihii nadaafadda, isla markaana uu majarafadda gacantiisa ku qabsado, waxay lahayd muhiimad hoggaamineed oo aad u weyn. Waxay iftiimisay sida uu madaxweynuhu u doonayo goleyaasha deegaanku in ay dedaalaan dadweynahana jiheeyaan. In kastoo maayarku aanu ka soo bixin xisbiga Madaxweynaha haddana waxa muuqata in Madaxweynuhu sida ugu sarraysa oo aan kala-hadh lahayn u dhiirigelinayo ulana shaqaynayo maayar Cabdikariim.
Ficilka madaxweynuhu wuxu inoo sheegay in uu fahansan yahay muhiimadda dawladaha hoose iyo abaabulka dadweynuhu ay u leeyihiin horumarinta dalka iyo dadka, sidaas daraadeedna aanay muhiim ahayn in xisbiyo loo kala eego laakiin ay muhiim tahay in shaqadooda lagu garab galo loona soo kala dhawaysto sida ay u kala shaqo wanaagsan yihiin.
Waxa iyaguna xusid mudan dhammaan dadkii caanka ahaa ee ka qayb-qaatay oo ay ka mid ahay Edna Aadan. Waxay ahayd dhiirigelin abaabul dadweyne. Durtaba meelo badan oo Hargeysa, Burco, Gabiley iyo magaalooyinka kale ka mid ah xashiishkii waa laga guray waana la nadiifiyey.
Laakiin xikmaddu waxay ku jirtaa sida shaqadaa loo joogteeyoo loogana dhigo mid istiraatijig ah. Waa in dhammaan dawladaha hoose la yimaadaan istiraajiyado isku xidhan oo aragtidooda wata oo shanta sanno ee soo socda ka dhigi kara caasimadaha Somaliland kuwa nadiif ah.
Haddii ay sheekadu ku banjarto maalin ama laba ay shacbigu isku soo baxaan xaaladdu sideedii hore ayay ku noqonaysaa, khashinkuna dib ayuu u tuulmayaa.
Si kastoo ay tahay, waxa muuqda in dawladaha hoose ee dalka ay shaqo wacani ka bilaaban tahay. Camalka kiisa ugu wanaagsana waa joogtay. Shaqadii socota iyo midha dhasha ha noqoto ayaanu leenahay.
« Kooxdii koowaad ee turjumaannadii la shaqeeyey ciidamada Maraykanka ayaa loo daadgureeyey Maraykanka
DF oo soo bandhigtay Saraakiil ka tirsanaa Al-Shabaab oo isa-soo dhiibay »